Baasaboorka Soomaliya Waxaa lagu tegi karaa 36 dal Visa la’aan (Daawo Video Sir ah) | Nabadoon Online	Monday, July 24th, 2017	Home
Baasaboorka Soomaliya Waxaa lagu tegi karaa 36 dal Visa la’aan (Daawo Video Sir ah) Mar 19, 2017 - Aragtiyood	Hadii aad haysato baasaboorka Soomaaliya waxaad fursad u haysataa in aad u dhooftid 36 dal adigoo aan wadan ama dalban dal ku gal (Visa).
HALKAN KA DAAWO WADAMADA LAGU TAGI KARO
Sideed kamid ah dalalkaas uma baahnid wax Visa ah. 28-ka kale waxay dal ku galka kugu siinayaan garoonka dhexdiisa (Visa Upon Arrival).
Waa suurta gal wadamada qaarkood in ay kugu xiraan shuruudo, tusaale ahaan Lubnaan marka aad kasoo degtid garoonka waa inaad sidato $2000 iyo tigid noqosho ah si laguugu ogolaado in aad u gudubtid gudaha dalkaasi.
Dhamaan wadamada kale ee dunida hadii aad doonayso inaad ka hesho dal ku gal waa inaad martid nidaamka caadiga ah, iyadoo dalkastaa leeyahay xeerar u gaar ah.
Waxa jira dalal aan inta badan Visa siin qofka wata baasaboor Soomaaliga oo diida codsigiisa xataa iyagoo aan qiimayn.
Dalalka diida isla markaba codsiga qofka sita baasaboorka Soomaaliya:
Sababta oo ah xuduudaheeda waxa maamula Israel oo diida in dalkaas loo gudbo)
Hadii aad jeceshahay inaad ku safartid baasaboorka Soomaaliya fadlan booqo mareegta Wasaaradda Arrimaha Dibada ee dalka aad u safraysid ama toos u tag safaarada kuugu dhow si aad uga heshid macluumaad badan